ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဓာတ်လှေကား Electro-စက်မှုအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır - rayhab ဖြစ်ပါသည်
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Horizontal Lifeline ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Nazilli လူကူးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းစက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကားလုပ်ခြင်း »
ဘယျအရာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် ESCALATOR AND LIFT မှNAZİLLİလူကူးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 411412
လူကူးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းကတော့3နှင့်2အရည်အတွက်အရည်အတွက်ဓါတ်လှေကားစက်လှေကားလုပ်ခြင်း
ခ) Place: Nazilli / Aydin
အဆိုပါပေးပို့တည်နေရာ (နှစ်ရာ) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှ 200: ဃ) အချိန်လုပ်ဆောင်ပါ။
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 25.09.2019 - 10: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Yenikapi - ငါ Ataturk လေဆိပ်က Metro Line နဲ့တိုးတက်စွမ်းဆောင်ရည် Electro-စက်မှုစနစ်များYaptırılacaktır 16 / 04 / 2018 ငါတိုးမြှင့် Metro LINE စွမ်းရည်နှင့်တူရကီအစ္စတန်ဘူလ် Metropolitan စည်ပင်သာယာဥရောပဘက်ခြမ်းရထားလမ်းစနစ်စီမံခန့်ခွဲရေး Yenikapi ၏ရထားလမ်းစနစ်ဦးစီးဌာန Electro-mechanical systems ဝယ်ယူရေးအသိပေးစာသမ္မတနိုင်ငံ - Atatürkလေဆိပ်အလင်းရထား Line နဲ့ Esenler ကျောင်းပရဝုဏ် Capacity Building, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် Electro-စက်မှုစနစ်များထောက်ပံ့ရေး, တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေး ပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးဥပဒေပုဒ်မအရသိရသည်အမှတ် 4734 19 အင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 150447 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်နောက်ဆက်တွဲဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အဦး, ဥရောပဘေးထွက်ရထားစနစ်ညွှန်ကြားမှု, Osmaniye Mah ။ အဆိုပါ Cobancesme ...
Bursaray signal လေလံ | BursaRay အရှေ့လိုင်း III ကို။ အဆင့် Electro စက်မှုလေလံရလဒ်များကို (အထူးအစီရင်ခံစာ) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည် 03 / 06 / 2012 BursaRay III ကို: လေလံအချက်ပြ Bursaray ။ အရှေ့လိုင်းအဆင့် Electro စက်မှုနတ်ဘုရားမကျင်းပခဲ့ပါတယ်, သူနု5ကုမ္ပဏီပါဝင်ခဲ့။ 9) Siemens AG က:5ကုမ္ပဏီတင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံရရှိ, 1 ကုမ္ပဏီများတင်ဒါပါဝင်ခဲ့အောက်ပါအတိုင်းသကဲ့သို့, စျေးနှုန်းများများမှာ2နှုန်း 18.870.205) Unitronics: သဘောမတူ 3) sys စနစ်ဆော့ဝဲ:4နှုန်း 21.487.549) က Ultra နည်းပညာ Ind 5) Tewet AG ကသဘောမတူ။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ AS: အဆိုပါဆုရှင်: က Ultra နည်းပညာ Ind £ 16.484.000 တင်ဒါကော်မရှင်နုနှင့်နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းများပါဝင်သည့်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏လုံလောက်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်ရလဒ်များကိုကြေညာခဲ့သည်။ £ 16.484.000: AS နေကြပါပြီ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လျှပ်စစ်စက်မှု Tools များ Derince လမ်းမကြီးYaptırılacaktır၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲညွှန်ကြားမှု 18 / 05 / 2018 နက်ရှိုင်းသောလမ်းကြောင်းများလျှပ်စစ်စွမ်းအား Tools များ STATE ရထားလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးYaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD) 1 ၏စက်မှုအလုပ်ရုံဦးစီးဌာန။ Fenner ၏လျှပ်စစ် Installer ၏ဒေသဆိုင်ရာဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး Derince လမ်းမကြီးမက္ကင်းနစ် Tools များအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲညွှန်ကြားမှုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်များ၏လုပ်ခြင်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 240554 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရထားဘူတာရုံးအဆောက်အအုံ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်အရေအတွက်ကိုကော်မရှင်34 Haydarpaşa / အစ္စတန်ဘူလ်ခ xnumx.kat: 34716 - 2163378214 ဂ) e-mail လိပ်စာ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Eskisehir Inonu YHT-Yaptırılacaktırဓါတ်လှေကားအလုပ်လုပ်မြေပေါ်လူကူးတံတား၏လိုင်း၌တွေ့ 23 / 07 / 2018 Hatt အတွက် Eskisehir-Inonu YHT Yaptırılacaktırဓါတ်လှေကားအလုပ်လုပ် YHT ဒေသန္တရရုံး Eskisehir-Inonu YHT လိုင်းကီလိုမီတာ 276 + 992 နှင့်ကီလိုမီတာ 278 + 738 ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်4အမှတ်ပြုသောအမှု 4734 Piece ဓါတ်လှေကားမှမြေပေါ်လူကူးတှငျတှေ့မြေပေါ်လူကူးသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) ကိုတွေ့ အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေ 19 သည်နှင့်အညီအပိုဒ်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 358616 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Eti ခရိုင်, Celal Bayar Boulevard အဘယ်သူမျှမ၏ YHT ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု: 78, 1 ATG Mall က။ ကြမ်းပြင်ÇANKAYA / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 75392 - 3123090575 က c) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Yaptırılacaktırအတွက် Bursaray ဘူတာဓါတ်လှေကားအလုပ်လုပ် 29 / 05 / 2018 Bursaray ဘူတာYaptırılacaktır BURSA Metropolitan စည်ပင်သာယာအတွက်ဓာတ်လှေကားအလုပ်လုပ်တွေ့ရှိခဲ့ Bursaray ဘူတာထဲမှာ disassembly စုစုပေါင်း 23 စုစုပေါင်းမသန်စွမ်းသူများပလက်ဖောင်း, အစားထိုးနယူးဓာတ်လှေကားကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် 4734 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေရေတွက်တပ်ဆင်ခဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 259613 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်က New Service ကိုအဆောက်အဦးအောင်ပွဲခံရပ်ကွက် Ankarayol CAD ။ အမှတ် 1 16240 OSMANGAZİ / BURSA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2244441600 - 2247161206 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: နုစာရွက်စာတမ်း၏ ihale.sbmd@bursa.bel.t CA) ကအင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည် ...
ဓာတ်လှေကား Electro-စက်မှုအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır, TCDD3။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Yenikapi - ငါ Ataturk လေဆိပ်က Metro Line နဲ့တိုးတက်စွမ်းဆောင်ရည် Electro-စက်မှုစနစ်များYaptırılacaktır
Bursaray signal လေလံ | BursaRay အရှေ့လိုင်း III ကို။ အဆင့် Electro စက်မှုလေလံရလဒ်များကို (အထူးအစီရင်ခံစာ) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လျှပ်စစ်စက်မှု Tools များ Derince လမ်းမကြီးYaptırılacaktır၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲညွှန်ကြားမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Eskisehir Inonu YHT-Yaptırılacaktırဓါတ်လှေကားအလုပ်လုပ်မြေပေါ်လူကူးတံတား၏လိုင်း၌တွေ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Yaptırılacaktırအတွက် Bursaray ဘူတာဓါတ်လှေကားအလုပ်လုပ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကမ္ဘာမြေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ, အနုပညာ structures များ, ပလက်ဖောင်းပေါ်နှင့်တံတားအလုပ်လုပ် guardrails ပြီးစီးအတူကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအောင်လိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စပ်, ဆောက်လုပ်ရေးအကျင့်ကိုကျင့်, Superstructure အလုပ်လုပ် built ပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စပ်, ဆောက်လုပ်ရေးအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း, အထွေထွေအလုပ်လုပ် Track အလုပ်လုပ် built ပါလိမ့်မည်
လက်ဝါးကပ်တိုင်လမ်းများကမ္ဘာမြေ Works, အနုပညာ structures များနှင့် Superstructure အလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır